25 astaamood oo cusub oo aad uga bogan doontid macOS High Sierra | Waxaan ka socdaa mac
25 astaamood oo cusub oo aad uga bogan doontid macOS High Sierra
Jose Alfocea | | macro High Sierra
Galabnimadan, saacado yar gudahood, ayaa sii deynta rasmiga ah ee macOS High Sierra, Nidaamka cusub ee desktop-ka ka shaqeeya ee loogu talagalay Apple ee loogu talagalay Mac-yadayada.
Magacan, shirkadda Cupertino waxay umuuqataa inay rabto inay muujiso inay tahay tallaabo horay loogu sii qaaday isbeddelka macOS, hal darajo oo horumar ah. Tani waxay horseedday fikradda guud ee ah in astaamaha cusubi ay yar yihiin oo ay tahay nooc fudud oo casriyeyn ah. Sida aad hoos ku arki doontid, waxba run ugama sii fogaadaan maxaa yeelay oo leh macOS High Sierra waxaa jira daraasiin waxyaalo ah oo aadan horay u sameyn karin, inkasta oo marka la arko wax waliba ay isku mid yihiin
macOS High Sierra, waa warar ka badan intaad moodeysay
macOS High Sierra nama siiso warar ku saabsan naqshadeynta iyo heerka bilicsanaanta. Xaqiiqdii, tan iyo markii ay soo degtay Yosemite, wax walbaa waxay kujireen ficil ahaan lama taabtaan heerka naqshadeynta, si kastaba ha noqotee, shaqooyinka cusub iyo qaababka waxay noqon doonaan kuwo badan oo kaladuwan. Xaaladaha badankood, waa isbadaladaas yar ee isbedelka sameynaya taasina waxay naga dhigeysaa inaan ku raaxeysano macOS sida maalmaha ugu horreeya.
Haddii aad u maleyneysay in macOS High Sierra uusan kuu keeneynin wax cusub, waxaan ka xumahay inaan kuu sheego inaad khalad ahayd. Xaqiiqdii, xitaa waad awoodi kartaa dib u cusboonaysiin qalabkii hore. Waana hubaa in isla marka aad dhameysid aqrinta qoraalkan aad sugi doontid 19:00 waqtiga Isbaanishka inaad kala soo baxdo oo aad ku rakibto nidaamka cusub ee hawlgalka. Aan aragno waxaas oo dhan macOS High Sierra muuqaalada, astaamaha iyo wararka waa:
Nidaamka faylka cusub Nidaamka Faylka ee Apple (APFS) oo beddelaya nidaamkii hore ee HFS +, nidaam horey u jiray soddon sano, taasna waxay ka dhigi doontaa xawaaraha maaraynta faylalka Mac-da ah "duul".
Waxaad awoodi kartaa shakhsiyeeyo bogga aad kujirtid hagaajinta faahfaahinta sida adblock, zoom iyo in ka badan, bog kasta.
Waxaan sidoo kale dejin karnaa habka akhriska otomaatiga ah dhammaan bogagga shabakadaha taageera qaabkan. Shaki la'aan, faahfaahin yar oo u fududeyn doonta kuwa booqda oo akhriya daraasiin iyo daraasiin maqaal maalin kasta.
Adiguna ma sii sugi doontid inta fariimaha lagu diraayo iPhone-kaaga inay ka muuqdaan Mac-gaaga, ama taa caksigeeda, maxaa yeelay laga bilaabo hadda farriimaha waxaa lagu mideeyay iyada oo loo marayo iCloud, sidaa darteed mar dambe ma waayi doontid dhibaatooyinka isku dheelitirka.
Si loo badbaadiyo tamarta iyo kheyraadka, markii aanan sameynin barnaamij furan daqiiqado, wuu xirmayaa.
Codsiga Boostada ayaa hadda dhaqso badan oo ka waxtar badan. Kaliya maahan sababta oo ah emayllada ayaa hadda hayn doona illaa 30% meel ka yar laakiin sidoo kale maxaa yeelay way ka dhakhso badan tahay raadinta farriinta emaylka iyo sidoo kale, waxaan heli karnaa helitaanka shanta e-mayl ee aan helnay inta badan, si aan uga dheereynno.
Falanqeynta Boosta sheeko cusub oo noo oggolaan doonta inaan qoro farriimo isla waqtigaas oo aan ku indha indheynno kuwa aan helno.
Siri waa la baray oo hada codkeedu waa mid dabiici ah oo aan astaamo lahayn.
Safari, a maareynta buskudka waxay ka hor istaagi doontaa xayeysiiyayaashu inay "na ceyrsadaan" shabakadda oo dhan alaabta aan raadineynay. Faahfaahin dheeri ah Halkan.
Sidoo kale Qoraallada uu Siri na tusayo waxay hagaajinayaan aqrintooda iyadoo qaab ka weyn iyo animation cusub ay ku dul qoran tahay astaanta
Hadana hadaad doorbido waad awoodaa u qor Siri intii aad la hadli lahayd, aad u fiican markaan kaligaa aheyn.
Waxaan sidoo kale awoodnaa ku wareeji sawirro ama fiidiyow xusuusin ah laga bilaabo barnaamijka Sawirada laftiisa.
Iskuxir sawir leh tikniyoolajiyadda aqoonsiga wajiga Apple.
Oo waxaan ku milmi karnaa saddex sawir illaa abuur sawirro dhaqaaqa, nooc ka mid ah GIF-yada ama Sawirada Tooska ah.
Horay ugu soco xulashada ah tafatiri sawirada kahor intaadan qaadin, qalab aad ka heli karto barnaamijka Sawirada.
Iyada oo leh macOS High Sierra, Bar-tilmaameedka Finder hadda waa mid joogto ah.
Adiguna waad awoodi doontaa Samee Xusuusin Qoraallada taas oo ay tahay inaan ku xusho qoraalka aan rabno in nalagu xasuusto.
Aah! Waana karnaa miisas ku sameyso Qoraallada. Kuwani waa miisas fudud, laakiin miisas dhammaadka maalinta ah, oo faa'iido leh maalinba maalinta ka dambaysa.
ka talooyinka raadinta waxay gaarayaan Qoraalada.
Samee shaashadda shaashadda ee wicitaannada FaceTime. Labada wada-hadalba waxay ku heli doonaan ogeysiin shaashadda ah sidaa darteed, ha u maleynin waxyaabo xun.
Ku raadi duulimaadyada Tooska ah.
Mid ka mid ah kuwa ugu cadcad: wadaag faylasha adoo adeegsanaya iCloud. Tani mar horeba waa wax kale.
In kasta oo aysan u gaar ahayn macOS High Sierra, hadda laga bilaabo sidoo kale waan awoodnaa la wadaag qorshaheena kaydinta iCloud En FamiliaHaa, waa inaan heysanaa ikhtiyaarka 200 GB.
Hagaajinta kumbuyuutarka ee adeegsadayaasha Carabiga iyo Jabaaniiska.
Dabcan a wallpaper cusub oo qurux badan, waxtar yar laakiin aan marwalba jecel nahay inaan aragno.
Ha iloobin diyaarso Mac-gaaga imaatinka macOS High Sierra oo markaa aad ku raaxeysan karto waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah dhammaan shaqooyinkan iyo muuqaalada cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macro High Sierra » 25 astaamood oo cusub oo aad uga bogan doontid macOS High Sierra
U qaabee bogagga aad jeceshahay sida aad u jeceshahay mahadsanid Safari ee MacOS High Sierra
Furitaankii ugu horreeyay iyo dareenkii ugu horreeyay ee Apple TV 4k